Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo la wareegay degaanno ka tirsan gobolka Hiiraan
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu soo sheegay in ay la wareegeen gacan ku haynta degaano hor leh oo ka tirsan gobolka Hiiraan, kuwaasoo ay horey ugu sugnaayeen dagaalyahannada Al-Shabaab.
Sarkaal Sare oo lagu magacaabo Tawane Axmed Guruubeey, kuna hadlayey magaca ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Hiiraan oo warbaahinta la hadlayey ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo ku AMISOM ee reer Jabuuti ay u suurta gashay in ay la wareegaan degaannada Luuq Jeelow iyo Baar oo 30 km u jira magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Col. Taawane ayaa waxa kale oo uu warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay ka go'an tahay inay dagaalka ay kula wareegayaa guud ahaan gobolka Hiiraan ay sii wadi doonaan.
Howlgalka ay ciidamada is garabsanaya kula wareegaan degaannadaasi ayaa yimid ka gadaal markii ay xalay weerar culus oo ay soo qaadeen dagaalyahannada Al-Shabaab lagu ekeeyey goobo ay galbeedka magaalada kaga sugnaayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Waxa sida ay sheegayaan saraakiisha dowladda jira dhimashada 12 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, halka dhaawacuna lagu sheegay in uu gaarayey 20, kuwaasoo loo qaaday dhinaca magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud, halkaasoo xaruun weyn u ah Shabaabka.